Amaqhinga ama-5 wokukhulisa isitoreji ekhishini elincane | Bezzia
UMaria vazquez | 08/06/2021 12:00 | Ukupheka
Amakhishi amancane ayinselele. Ungasenza kanjani isikhala sakho konke esikudingayo esikhaleni esincane kangaka? Ukukhulisa isitoreji kubalulekile ekwenzeni ikhishi lisebenze futhi ukupheka kuyaqhubeka kube ngumsebenzi esiwujabulelayo. Kepha ukwenze kanjani?
E-Bezzia siqoqe uchungechunge lwamaqhinga ukuze khulisa isitoreji ekhishini elincane. Futhi awudingi ikhishi elingenalutho ukuze ukwazi ukuzisebenzisa; ngobuciko ungazisebenzisa ekhishini eselivele selinempahla. Qaphela!
Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa amaqhinga esihlanganyela nawo, sifuna ukuthi ucacelwe ukuthi uma unezinto eziningi kunendawo yokugcina izinto, awusoze wenza ikhishi lakho lihlanzeke. Beka kuqala, lahla ongakusebenzisi njalo futhi konke kuzoba lula kakhulu.
1 Sebenzisa zonke izindonga
2 Nciphisa usayizi wemishini
3 Ukubheja kumatafula asusekayo
4 Beka eceleni isiza sento ngayinye
5 Faka iminyango eshelelayo
Sebenzisa zonke izindonga
Unalo udonga lwamahhala ekhishini lakho? Faka izixazululo zaphansi evumela wena ukuthi wandise isikhala sesitoreji. Hlanganisa izixazululo zesitoreji esivaliwe nezinye ezivulekile ezikuvumela ukuthi ube nakho lokho okusebenzisa nsuku zonke. Lezi zixazululo azidingi ukuba zijule kakhulu; Amasentimitha angama-20 anele kokubili ukuhlela izimbiza zengilazi ezinemidumba, okusanhlamvu, imbewu nezinongo, kanye nokugcina izinto ezincane zokusebenza, izitsha noma izinkomishi.
Ungasizakala nangaphambili lekhishi ukuze ube nesikhala esengeziwe sokuhlela ama-condiment nezitsha ezahlukahlukene. A insimbi noma ishalofu elincane lizokunika isikhala phakathi kwendawo yokusebenza namakhabethe aphezulu ngezinto eziningi kunalokho ucabanga.
Nciphisa usayizi wemishini
Imishini ithatha ingxenye enkulu yendawo ekhishini lethu. Noma kunjalo, lokhu akudingeki ukuthi kube kanjena; singaguqula ubukhulu bezinto zethu zokusebenza zilingane nekhishi lethu. Ukubeka phambili phambili kuyisihluthulelo ukukhetha ukuthi iziphi izinto zikagesi esingazenza ngaphandle kwazo noma esizinciphise ngosayizi.
Ingabe umshini wokuwasha izitsha ubalulekile kuwe? Mhlawumbe ungabunciphisa ubukhulu bayo uma uyigqoka njalo. Futhi, uma ungapheki ngokweqile, awudingi i-cooker top-burner. Ungacabanga nokwenza ngaphandle kwehhavini noma i-microwave bese ukhetha i-oven microwave, a into esebenza ngomsebenzi ophindwe kabili. Lezi kanye nezinye izinguquko ezifana nokunciphisa usayizi wesiqandisi kuzokuvumela ukuthi ujabulele isikhala esithe xaxa sokugcina izinto.
Ukubheja kumatafula asusekayo
Itafula lokukhishwa lisisiza kanjani ukukhulisa isitoreji ekhishini? Imvamisa lapho sinikeza ikhishi sikwenza ngokugcina olunye lwezindonga ukubeka itafula. Itafula elisemakhishini amancane livame ukugoqwa. Kodwa-ke, namuhla akudingeki dela udonga lwamakhabethe ukubeka itafula.
Amatafula wokukhipha enye indlela yokusonga amatafula emakhishini amancane. Zihlanganiswe namakhabethe ekhishi sengathi ucezu lweTetris. Ngale ndlela, isikhala sokugcina esidinga ukukhishwa sincane.
Beka eceleni isiza sento ngayinye
Enye indlela yokwandisa isikhala sokugcina ukwaba isikhala sento ngayinye. Ngale ndlela kuphela lapho ungakwazi nokwandisa ikhabethe ngalinye noma abadilidi ukufaka izinto eziningi ngangokunokwenzeka. Ungakufezekisa lokhu ngokusebenzisa izixazululo ezisusekayo, izihlukanisi ...
Linganisa kahle ikhabethe ngalinye, lokho ofuna ukukugcina bese ubheka izixazululo ezifanele zokulisebenzisa kahle. Namuhla kuningi izitolo ezinikezelwe enhlanganweni yasekhaya lapho uzothola khona konke okudingayo. Kangangokuthi kuzofanele ugweme ukuhlanya ukuze ungasebenzisi ngokweqile.
Faka iminyango eshelelayo
Iminyango eshelelayo ixazulula izinkinga eziningi ezindaweni ezincane. Abagcini nje ngokuhambisa ukunyakaza kulezi, kepha bayakuvumela ukuthi ubeke amakhabethe lapho ngeminyango ejwayelekile lapho kungenakwenzeka ukwenza njalo. Bheka ama-pantry asesithombeni ngenhla! Uzodinga amasentimitha angama-25 ukujula ukuze wenze okulingana nezinhlelo ezilula futhi ezingabizi kakhulu zemodyuli neminyango eslayidayo.
Uyazithanda lezi zinhlobo zemibono ukwenza ngcono ukusebenza kwekhishi? Ingabe ziyasebenziseka kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Amaqhinga ama-5 wokukhulisa isitoreji ekhishini elincane